गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई महानगरको जनप्रतिनिधिमा घाटा कि फाइदा ? - Media Dabali
गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई महानगरको जनप्रतिनिधिमा घाटा कि फाइदा ?
काठमाडौं - अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धनले मंगलबार मध्यराति महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखमा भागबन्डा गरेका छन् । अहिलेको भागबन्डाले महानगरमा कांग्रेसलाई घाटा लागेको छ ।
पाँच वर्षअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा सातजना निर्वाचित भएका थिए । तर, अहिलेको गठबन्धनअनुसार निर्वाचनमा कांग्रेसले ६ वटा पद मात्रै पाएको छ । जबकि निर्वाचन भएर आउने नआउने भन्ने निश्चित छैन ।
०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै पद जितेको थियो । काठमाडौं, भरतपुर र वीरगन्ज महानगरपालिकामा उपमेयर जितेको थियो । यसरी कांग्रेसबाट सातजना निर्वाचित भएका थिए ।
ललितपुर महानगर मेयरमा चिरिबाबु महर्जन र उपमेयरमा गीता सत्याल, विराटनगर मेयरमा भीम पराजुली र उपमेयरमा इन्दिरा कार्की, काठमाडौं मेयरमा हरिप्रभा खड्गी, भरतपुर महानगर उपमेयरमा पार्वती शाह र वीरगन्ज महानगरको उपमेयरमा शान्ति कार्की निर्वाचित भएका थिए ।
तर, यसपटक कांग्रेसको भागमा काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको मेयर तीनजना, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखरा उपमेयर तीनजना गरी ६ जना मात्र भागमा परेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनका कारण कांग्रेसले आफूले जितेको जनप्रतिनिधि पनि गुमाउने भएको हो ।
अबको निर्वाचनमा कांग्रेसको मुख्य भिडन्त भनेको एमालेसँग मात्रै हो । विगतमा ओलीको जताततै वाहवाही हुँदा पनि कांग्रेसले स्थानीय तहमा राम्रै जित हात पारेको थियो ।
यसपटक पनि कांग्रेसको काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगरमा ठूलो भोट बैंक छ । गठबन्धनका कारण कांग्रेसले अन्य दललाई मत हालेर जिताउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विगतको मतका आधारमा कांग्रेसलाई थोरै मात्र मत आए सबैतिरका उम्मेदवारले जित्ने भएकाले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
बुधवार, बैशाख ३१ २०७७०२:०१:३७